NA STEETI DELTA, AMALA MMADỤ ABỤỌ IKPE ỌNWỤ – hoo!haa!!
Ụlọ ikpe ukwu dị na Wọrị na steeti Delta, amala otu nwata akwụkwọ na otu onye ọkwọ ụgbọ-ala ikpe ọnwụ.
Mmadụ abụọ ndi a bụ Colịns Okoro na-agụ akwụkwọ maka ego na nchekwa ego n’ụlọ akwụkwọ Politekinik nke Steeti Delta dị n’Oghara; nakwa Ejemuta Adamu Ogofure, onye ọkwọ ụgbọ-ala ma bụrụkwa onye si na Kanan n’okpuru ọchịchị ime obodo ndịda Isoko. Aga-eji egbe dulaa ha mmụọ maọbụ kwụgbuo ha akwụgbụ.
Onye ọkaikpe ukwu bụ jọstis A. A. Onojovwo nọrọ n’ụbọchị Faraidee gara aga maa ndi a ikpe ọnwụ n’ihi na ha anaghị ekwe ndi obodo Ole nke ndịda Isoko, ñụrụ mmiri tọgbọ iko ha, site n’iji egbe zu ha ori nakwa ịtọrọ ndi mmadụ.
Ụlọ ikpe ahụ tọrapụrụ onye nke atọ n’ime ndi a n’ihi na enweghị ezigbo ihe akaebe gosiri na nwoke a so na ndi omekome a. Etu osina adị, adọrọ nwa amadị bụ Jọnị Ighenemairo aka na ntị, ka ọ sepụ aka n’ije njem ana enyo enyo. Agwara ya, na ọbụrụ na o wepụghị aka enwe n’ofe, na onwere ike ghọrọ ya aka mmadụ mgbe aka ga-akpara ya ọzọ.
Onye ọkaikpe a kwuru na Kọlịns, onye Ekieugbo nke mgbago ọchịchị ime obodo Ugheli na Ejemuta Adam dara iwu itikọ isi ọnụ zue ndi mmadụ ori ma tọrọkwa ndi mmadụ. Ọ sịrị, n’ihi nke a na ihe chere ndi a n’ihu bụ ọnwụ nkwụgbu maọbụ mgbagbu.
Jọstis Onojovwo kwuru na isi sekpụ ntị n’ikpe ọnwụ amara ndi a bụ ọtụtọ ha tọọrọ otu onye nkuzi di elu na Pọliteknik nke steeti Delta, nke Ozoro, aha ya bụ Mazị Vinsent Ogboghro, ka ọnwa ise n’afọ puku abụọ na iri na abụọ dị n’abalị asaa, n’obodo ana-akpọ Irri nke dị na nlekọta ụlọikpe Ole.
Onye ọkaikpe a kwuru na, site n’ileba anya na ngụpụta agụpụtara iwu ndi a dara, na-achpụtara na ihe niile na-eme ihe ka ọ bụrụ arụ zuru oke na ihe ọjọọ ndi a mere.
Ọ sị na ha nara onye ha tọọrọ ugbọ-ala nkpori ndụ Họnda Akọd ya nwere akara AL 51 LEH ma kwue na ha agaghị ahapụ nwa amadị a belu sọ ma enyere ha nde naira ise. Ọ sịkwara na ha mara ámùmà itọrọ otu nwanyị nke aha ya bụ oriakụ Preshọs Ibenegbu.
Jọstis Onojovwo kwuru na ụlọ ikpe chọpụtara, site n’iwu agụpụtara ndi a dara, na mmadụ abụọ n’ime mmadụ atọ ndi a bụ amakekwu n’eziokwu.
Agụpụtakwara ọtụtụ mmekpa ahụ ndi otu amakekwu a na-eme ndi mmadụ n’akụkụ Ole, Irri nakwa Avịara.
Ọbụ mgbe ha chọrọ ịtọrọ Oriakụ Preshọs, ka nkata kpdoro onye aghụghọ, aka were kpara ha, mgbe ụgbọ-ala ha danyere n’ime apịtị.
Previous Post: ỌGỤ N’ESEMOKWU
Next Post: A CHỤRỤ DAỤRA MAKA ỊKPARỊ OSINBAJỌ